DHAGEYSO: Wasiirkii Galmudug ee XAAF Xilka ka qaaday oo goor-dhow Afka furtay (Maxaa cusub)? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DHAGEYSO: Wasiirkii Galmudug ee XAAF Xilka ka qaaday oo goor-dhow Afka furtay...
DHAGEYSO: Wasiirkii Galmudug ee XAAF Xilka ka qaaday oo goor-dhow Afka furtay (Maxaa cusub)?
Galmudug (Halqaran.com) – Saacado kadib markii xilka laga qaaday Wasiirkii Galmudug ee dhinaca Qorsheynta ayaa waxaa durba jawaab ka bixiyay Wasiir Cabdikaafi Maxamed Maxamuud.
kadib Wareegto kasoo baxday Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa wuxuu xilka kaga qaaday Wasiirka Qorsheynta ee maamulka.
Wasiirka xilka laga qaaday oo lagu magacaabo Cabdikaafi Maxamed Maxamuud wax auu sheegay in aysan sharci aheyn xilka qaadistaasi.
Axmed Ducaale Xaaf ayuu ku sheegay mid wakhtigiisa dhammaaday uuna xil magacaabi Karin xilna qaadi Karin, isagoo wasiir Cabdikaafi hadalkiisa intaa raaciyey in wasiirka la soo magacaabi doono uu xilka ku wareejinayo.
”Runtii Xaaf aniga iyo isagaba sii-hayayaal ayaan nahay wax xil ahna igama qaadi karo marka warqad xamar laga soo qoray looma baahnee mid Shaqada laga soo qoray ayaa la rabaa, waxaana arrintaasi ka dambeeysa dowladda Nabad iyo nolol gaar ahaan Guddiga shirka dib u heshiisiinta Galmudug ayuu yiri Cabdi Kaafi Maxamed Maxamuud”. ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa eedeyn kulul u jeeday Mas’uuliyiin ka tirsan Dawladda Soomaaliya, kuwaasoo uu sheegay in ay gadaal ka riixayeen xilka qaadista Xaaf uu sheegay in isaga lagu sameeyey.
Axmed Ducaale Xaaf
Wasiirkii Galmudug ee XAAF Xilka